Hay’adda NISA oo laga beri-yeelay kiiska Ikraan Tahliil | Dhacdo
Hay’adda NISA oo laga beri-yeelay kiiska Ikraan Tahliil
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, General Cabdullaahi Buulle Kamey oo ka mid ah Guddigii baarayay kiiska Ikraan Tahliil Faarax ayaa caawa sheegay in Hay’adda NISA lagu waayay wax caddeymo ah, oo muujinaya ku lug lahaanshaha maqnaanshaha gabadhaasi.
Xeer Ilaaliyaha ayaa sheegay in NISA ay si wanaagsan ula shaqeysay Guddigii waday baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil.
Waxa kaloo uu sheegay inay baareen Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Agaasimaha KMG ee Hay’adda NISA, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey), Cabdullaahi Aadan Kulane, Cabdikhani Wadna-qabad iyo gabar lagu magacaabo Asma Yuusuf, oo ka tirsan hay’adda NISA, wax caddayn ahna ay ku waayeen.
Warkan ka soo yeeray General Cabdullaahi Buulle Kamey ayaa imaanaya, xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in saddex ka mid ah Saraakiisha NISA ee kiiskaasi ku eedeysan loo wado Xildhibaano Golaha Shacabka ka tirsan.
Madaxii hore ee Shaqaalaha Hay’adda Sirdoonka Somaliya, Cabdullaahi Aadan Kulane, Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Farey ayaa lagu wadaa inay isu sharaxaan xubinimadooda Golaha Shacabka.
Yaasiin Yarey ayaa toddobaadkii hore tegay Magaalada Dhuusamareeb, isagoona la kulmay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), waxaana xusid mudan in uu magaaladaasi kaga sii horeysay saaxiibkii Cabdullaahi Kulane. Kulane ayaa la fahamsan yahay in weli uu ku sugan yahay magaaladaasi.
Haddii Saraakiishan ay si rasmi ah uga mid noqdaan Golaha Shacabka waxay noqon doonaan Xildhibaano xasaanad leh, taasoo meesha ka saari karta in mustaqbalka lagula xisaabtamo maqnaanshaha gabadhaasi.
24-kii bishii July, qoyska Ikraan Tahliil ayaa Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida u gudbiyay liis ay ku qoran yihiin magacyada shakhsiyaadka ay u haystaan maqnaanshaha gabadhooda.
Kiiskan ayaa madax wareer ku riday Madaxda Dowlada Federaalka, marka aad eegto sida uu bishii September khilaaf uga dhex abuuray labada xafiis ee dalka ugu sarreeya, inkastoo 21-kii bishii hore October ee Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaruhuba ka heshiiyeen khilaafkoodaasi, ayna isu waafaqeen in baaritaanka kiiska gabadhaasi loo daayo Hay’adaha Garsoorka.